Topic: मानिसले किन गर्छ चुम्बन?
Author Topic: मानिसले किन गर्छ चुम्बन? (Read 6947 times)
« on: March 08, 2016, 12:46:56 AM »
चुम्बनबारे केही बेर सोच्नुभयो भने यो अनौठो र केही हदसम्म फोहोरी कृत्य जस्तो पनि लाग्छ। चुम्बन गर्दा एकअर्काको थुक, र्याोल साटासाट हुन्छ। एकपटक चुम्बन गर्दा आठ करोड ब्याक्टेरिया एकजनाको शरीरबाट अर्काकोमा सर्ने गर्छन्। र, यसरी सर्ने सबै ब्याक्टेरिया हानिकारक हुँदैनन् भन्न सकिन्न।
यति हुँदाहुँदै पनि चुम्बन धेरैका लागि अभिरुचिको विषय हो। प्रायः सबैले पहिलो चुम्बन गर्दा भोगेको रोमाञ्च, लज्जाबोध आदिलाई पछिसम्म सम्भि्कने गर्छन्। चुम्बनले सम्बन्धलाई सुरुचिपूर्ण बनाउँछ भन्ने धेरैको मान्यता छ।
त्यसो भए यस्तो अनौठो कृत्यको उद्भव कसरी भयो? यदि चुम्बन जीवनका लागि उपयोगी थियो भने मानिसका सबै समुदाय र जनावरमा यो किन अभ्यास छैन? अधिकांश जनावरले चुम्बन गर्दैनन्। केहीले चाहिँ गर्छन्। यस्तो किन भयो?
दश हजार वर्षअघि कृषि सुरु हुनुअघिसम्म मानिस शिकारी युगमा थियो। यदि अहिलेका शिकारी युगमा बाँचिरहेका मानिसले चुम्बन गर्दैनन् भने पक्कै पनि कृषि अविष्कार हुनुअघिका मानिसले पनि चुम्बन गर्दैनथिए भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। तर, ठोकुवा गर्नसक्ने अवस्था भने छैन। किनकि, अहिले शिकारी युगमा बाँचिरहेकाहरूको समुदाय धेरै अर्थमा कृषि आविष्कार हुनुअघिको शिकारी युगको समुदायभन्दा भिन्न छ।
चुम्बन संस्कारसम्बन्धी माथि उल्लिखित अध्ययनले चुम्बन झण्डै विश्वव्यापी रूपमा अभ्यास गरिने कृत्य हो भन्ने मान्यतालाई गलत साबित गरिदिएको अनुसन्धानमा संलग्न नेभेदा विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता विलियम जान्कोवियाक बताउँछन्। चुम्बन पश्चिमी समुदायको आविष्कार भएको र पुस्तान्तर हुँदै जाँदा यो चारैतिर फैलिन पुगेको उनी बताउँछन्।
उनको यो भनाइलाई सत्य साबित गर्ने केही प्रमाण पनि उपलब्ध छन्। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता राफेल लोडर्स्की पनि चुम्बनलाई नयाँ अभ्यास बताउँछन्। चुम्बनको लिखित इतिहास अध्ययन गर्ने क्रममा संसारभरिका प्राचीन ग्रन्थहरूको अध्ययन गरेका आधारमा उनले यस्तो निष्कर्ष निकालेका हुन्।
उनका अनुसार चुम्बनबारे उल्लेख गर्ने प्राचीन ग्रन्थमा संस्कृत भाषामा लेखिएका हिन्दू तथा वैदिक ग्रन्थ पर्छन्। '३५ सय वर्षअघिका ती ग्रन्थमा चुम्बनबारे उल्लेख छ। त्यहाँ चुम्बनलाई एकअर्काको आत्मा खिच्ने कृत्य भनिएको छ,' उनले भने।
इजिप्टका प्राचीन चित्रहरूमा दुई व्यक्ति शारीरिक रूपमा एकअर्काको असाध्यै निकट रहेको देखाइए पनि दुवैले ओठ जोडेको भने देखाइएको छैन। त्यसो भए चुम्बन किन र कसरी सुरु भयो? प्रकृतिले नै हामीलाई चुम्बन गर्न अग्रसर गराए पनि केही समुदायले चुम्बनलाई बलपूर्वक दमन गर्दै आएका पो हुन् कि? अथवा, यो साँच्चीकै मानिसले हालसालै गरेको आविष्कारमात्रै पो हो कि?
जनावरलाई हेरेर केही हदसम्म हाम्रो चुम्बन स्वभावबारे बुझ्न सकिन्छ। मानवसँग मिल्दोजुल्दो जीव चिम्पान्जी र बोनबोस (पिग्मी चिम्पान्जी)ले पनि चुम्बन गर्ने गर्छन्। इमोरी विश्वविद्यालयका बाँदरविद् फ्रान्स डी वालका अनुसार कुनै द्वन्द्व या झगडापछि चिम्पान्जीले एकअर्कालाई चुम्बन र आलिंगन गर्ने गरेका पटक–पटक देखिएको छ।
जंगली सुंगुर (बँदेल) ले एउटा तिखो खालको गन्ध शरीरमा उत्सर्जन गर्ने गर्छ, जसले पोथी बँदेललाई आकर्षित गर्छ। भाले बँदेलको शरीरमा उत्सर्जन हुने एन्ड्रोटेनोन रसायनले उसको शरीरमा तिखो गन्ध सिर्जना गरिदिन्छ, जसले पोथीलाई सेक्सका निम्ति भालेसमक्ष समर्पित हुन उक्साउँछ।
पोथीका लागि भालेको शरीरबाट आउने गन्ध शुभसूचक हो। किनकि, बढी एन्ड्रोटेनोन रसायन उत्सर्जन गर्ने बँदेलसँग गर्भाधान गराउने क्षमता पनि बढी हुन्छ। बँदेलमा गन्ध यति प्रबल हुन्छ कि छेउबाटै यसको भेउ पाउन सकिन्छ। चुम्बन गर्नेगरी असाध्यै नजिक गइरहनै पर्दैन।
अन्य स्तनधारी जीवको सन्दर्भ पनि योसँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ। हार्म्सटर नाम गरेको मुसाको एउटा प्रजातिकी पोथीले शरीरबाट एक किसिमको गन्ध फाल्छे, जसले भालेलाई उत्तेजित बनाउँछ। मुसाका अन्य प्रजातिले हाडनाता नजोडिएको र फरक जिनयुक्त पार्टनर फेला पार्न पनि रसायनसिर्जित यस्तै गन्धको सहारा लिने गर्छन्। आफ्नोभन्दा फरक गन्धको सहाराबाट पार्टनर छान्दा हाडनाता अथवा नश्लीय सम्बन्ध भएका मुसाबीच समागम हुने सम्भावना रहँदैन।
जनावरहरूले पिसाबमार्फत यस्तो गन्ध फाल्ने गर्छन्। 'पिसाब सुँघेर पार्टनरको योग्यता मापन गर्ने चलन जनावरमा हुन्छ,' लोडर्स्कीले भने।
घ्राणशक्ति हुनेमा स्तनधारी जीव मात्र छैनन्। पोथी माकुराले निकाल्ने गन्ध सुँघेर भालेले त्यस पोथीले भर्खरै आहार गरेकी छे/छैन भन्ने थाहा पाउँछ। यदि पोथी अघाएकी रहिछे भने मात्रै भाले सम्भोगका लागि तम्सिन्छ। किनकि, भोको पोथी माकुराको शिकार भइने डर भालेलाई हुन्छ।
यो सबै भन्नुको मतलब के हो भने घ्राणशक्तिको उपयोग गरेर योग्य सेक्स पार्टनर चयन गर्न जनावरलाई पार्टनरको असाध्यै नजिक गइरहनु पर्दैन। तर, मानिसको घ्राणशक्ति कमजोर हुन्छ। त्यही भएर ज्यादै नजिक गएर मात्रै हामी पार्टनरको गन्ध महसुस गर्न सक्छौँ। हुन त मानिसको शरीरबाट निस्कने गन्धकै आधारमा हामी उसको 'फिटनेस'को अनुमान लगाउन त सक्दैनौँ। तर, सेक्स पार्टनरको चयनमा मानिसको शरीरबाट निस्किने गन्धको महŒवपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने विभिन्न अध्ययनले देखाइसकेका छन्।
सन् १९९५ मा प्रकाशित एउटा अनुसन्धान प्रतिवेदनमा मुसाजस्तै महिला पनि अर्कै जिन भएका पुरुषको शरीरबाट निस्किने गन्धप्रति आकर्षित हुने गरेको जनाइएको थियो। यो निष्कर्ष अर्थपूर्ण छ। बेग्लै जिन भएका मानिसबीचको मैथुनबाट स्वस्थ बच्चा जन्मिने सम्भावना अधिक हुन्छ। यस्तोमा शारीरिक रूपमा नजिक गई पार्टनरको गन्ध पत्ता लगाउने सुविधा चुम्बनले मानिसलाई दिलाउँछ।
सन् २०१३ मा अनुसन्धानकर्ता लोडर्स्कीले चुम्बन अभिरुचिबारे गहिरो अध्ययन गरेका थिए। अध्ययनका क्रममा उनले सयौँ मानिससँग चुम्बनका क्रममा कुन कुरालाई बढी महŒव दिनुहुन्छ भनी सोधेका थिए। अधिकांश मानिसले पार्टनर कस्तो गन्धयुक्त छ भन्ने कुरालाई बढी महŒव दिने गरेको बताएका थिए। प्रजनन्का लागि योग्य भएका बेला महिलाले पुरुषको शरीरबाट आउने गन्धलाई अझ बढी महŒव दिने गरेको अनुसन्धानका क्रममा उनले फेला पारेका थिए।
अर्थात्, भाले बँदेलजस्तै पुरुषले पनि शरीरबाट निस्किने गन्धमार्फत महिलालाई आकर्षित गर्ने गर्छ। पुरुषको गन्ध उसको पसिनामा निहित हुन्छ। यस्तो गन्ध चाल पाएपछि महिलामा कामोत्तेजनाको पारो हल्का चढ्न पुग्छ।
'स्तनधारीहरूले धेरै हदसम्म गन्धकै आधारमा सेक्स पार्टनरको चयन गर्ने गर्छन्। हाम्रो शरीर पनि त्यस्तै खालको छ। मानिसको शरीर र स्वभावको विकासक्रममा यस्तो स्वभावमा केही चिज थपिन पुगेका छन्, ' लोडर्स्कीले भने।
चुम्बनमार्फत एकअर्काको गन्ध पत्ता लगाउनेगरी नजिकिने सुविधालाई मानव संस्कृतिले अहिले अनुमोदन गरेको छ। केही संस्कृतिमा गन्ध पत्ता लगाउने क्रिया बढ्दै गएर ओठको घर्षणसम्म पुगेको लोडर्स्की बताउँछन्। 'ओठको घर्षण कहिलेदेखि सुरु भयो भन्ने यकिन गर्न गाह्रो छ। तर, सुँघेर पार्टनर पत्ता लगाउने विधिलाई नै यसले सघाउ पुर्याेएको भन्ने प्रस्ट छ,' उनले भने।